Ityala le-iPhone 7 kunye ne-7 Plus liyahambelana ne-iPhone 8 kunye ne-8 Plus | IPhone iindaba
Iimeko ze-IPhone 7 kunye ne-7 Plus ziyahambelana ne-iPhone 8 kunye ne-8 Plus
Ukuhlaziywa ekudala kulindelwe kwe-iPhone 7 kunye ne-7 Plus kusishiye sinencasa yezolimo. I-iPhone 8 entsha kunye ne-8 Plus zineendlela ezimbalwa zoyilo ezahlukeneyo ukuba siyithelekisa nemodeli yangaphambili, i-iPhone 7 kunye ne-7 Plus. Iglasi ebuyayo yeyona nto iphambili kubuhle asinika yona, kuba zombini ikhamera ye-iPhone 8 Plus kunye ne-iPhone 8 isekwindawo enye.
Ukuba ungumqokeleli weqweqwe, njengomfundi wethu uIvan Silva osuka eMexico, kwaye ucinge ngokuhlaziya isixhobo sakho se-iPhone 7 okanye i-7 Plus ye-iPhone 8/8 Plus entsha, unokuqiniseka ukuba uya kuba nakho ukuqhubeka nokonwabela onke amaqweqwe onawo ethengwe kunyaka ophelileyo ngaphandle kwengxaki.
Kwiiveki zokugqibela, I-Apple yayiqale ukukhumbula inani elikhulu lamatyala ahlukeneyo anemibala evela kwintengiso.s, enokuba ngumqondiso ocacileyo wokuba i-iPhone 8 entsha kunye ne-8 Plus ayizukuqhubeka nokusebenzisa uyilo olufana ne-iPhone 6 kunye ne-6 Plus, ngokwahluka kancinci, kodwa xa iimodeli ezintsha zinikiwe, yonke into ibonakala ngathi iyabonisa ukuba isizathu sokukhumbula sinokuthengisa okuphantsi.
Ukuba sithatha ukhenketho lwamatyala amatsha athe u-Apple wazisa ngokusungulwa kwe-iPhone 8 kunye ne-8 Plus, ungaphoswa lithuba, sinokubona ukuba zonke Amatyala ahambelana ne-iPhone 8 kunye ne-8 Plus ayahambelana ne-iPhone 7 kunye ne-7 Plus. Ngokusebenzisa iVenkile ye-Apple ekwi-Intanethi, iApple isinika zonke iintlobo zamatyala, ezigqityiweyo ezahlukeneyo, izinto ... ke ukuba asicacanga kakuhle ukuba loluphi uhlobo lwecala esilifunayo, sithatha uhambo ngevenkile yeApple ngokuqinisekileyo siyakushiya amathandabuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Iimeko ze-IPhone 7 kunye ne-7 Plus ziyahambelana ne-iPhone 8 kunye ne-8 Plus
Ndicinga ukuba kulungile, kuba sele zininzi iintlobo, imibala kunye nokwenziwa kweefowuni ze-7 kunye ne-7 Plus.
Sivavanye isithethi seBluetooth se-Aukey SK-S1: silungile, sihle, kwaye sitshiphu
Ukusetyenziswa kweekliphu kusivumela ukuba senze imifanekiso eshukumayo ngekhamera ye-TrueDepth ye-iPhone X